Awooda Suuq geynta Gaarka ah | Martech Zone
Talaado, September 17, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Kyle Christensen
Xusuusnow markii shirkadda Nike soo bandhigtay ololeheeda Just Do It? Nike waxay awood u yeelatay inay ku guuleysato wacyigelin ballaaran iyo miisaan leh hal-ku-dheggan fudud. Boorarka, TV-ga, raadiyaha, daabac… 'Just Do It' oo Nike swoosh ayaa meel walba taagnaa. Guusha ololaha waxaa si weyn u go'aamiyay inta qof ee shirkadda Nike u heli karto inay aragto oo maqasho fariintaas. Habkaan gaarka ah waxaa adeegsaday inta badan noocyada waaweyn intii lagu guda jiray suuq-geynta suuq-geynta ama 'xilligii ololaha' oo si ballaaran ayay ula macaamileen macaamiisha waxayna keeneen iibin. Suuq geynta ayaa shaqeysay.
Si dhakhso leh horey ugu sii soco 30 sano, gal internetka, taleefannada gacanta iyo warbaahinta bulshada, waxaanan ku noolnahay xilli aad u kala duwan. Tusaale ahaan, dadka ayaa qaatay $ 25 bilyan oo doolar oo ku saabsan iibsashada laga sameeyay taleefannada iyo kiniiniyada 2012 oo keliya, 41% e-maylka ayaa laga furay aaladaha moobaylka oo qofka celcelis ahaan wax ku bixiya lix saacadood bishii Facebook. Tikniyoolajiyadda dijitaalka ahi waa mid udub dhexaad u ah nolosha macaamiisha taas awgeedna, macaamiisha ayaa wax badan ka doonaya isdhexgalka ay la leeyihiin noocyada. Waxay rabaan inay ka maqlaan noocyada kanaalka saxda ah, waqtiga saxda ah iyo fariimaha la xiriira. Taageerada tan, a sahankii ugu dambeeyay ee macaamiisha Responsys helay waxyaabaha soo socda:
Rabitaanka macaamiisha ee sii kordhaya ee xiriir shaqsiyadeed oo badan oo lala yeesho noocyada ayaa runtii hubaal ka beddelay ciyaarta suuqleyda. Waxay ubaahantahay tikniyoolajiyad casri ah iyo suuqgayn suuq geyn ah si loo horumariyo cilaaqaadka macaamiisha muddada dheer iyo saamaynta qadka hoose. Maanta, suuqleydu waxay u baahan yihiin inay u soo gudbiyaan waayo-aragnimo shakhsi ahaaneed macaamiisha dhammaan noocyada kala duwan ee kanaalada dhijitaalka ah - iyo qiyaasta ballaaran.
MetLife waa tusaale weyn. Haddii macaamilku booqdo Websaydhka MetLife si uu wax uga weydiiyo arrimaha caymiska, daaha gadaashiisa, waxay galayaan barnaamij shaqsiyadeed si heer sare ah loo qorsheeyay oo loogu talagalay inuu ka caawiyo macaamilka inuu dhammaystiro hannaanka adag ee marar badan. Waxay ka bilaabataa Websaydhka, laakiin waxay ku sii socon kartaa emayl, bandhig iyo SMS ogeysiisyada iyo codsiyada dabagalka ah. Intii aad socotey, farriinta waxaa loogu talagalay shaqsi kasta macaamilkiisa macnaha gaarka ah. Si fiican ayaa loo qabtay, barnaamijkani wuxuu keenaa waayo-aragnimo weyn oo macaamiil ah, iyada oo lagu dhiirrigelinayo macaamilka inuu dhammeeyo hawsha oo uu noqdo macaamiil MetLife. Mid ka mid ah kiisaska noocaas ah ee MetLife, abaabulkan farriimaha suuq-geynta ee ka socda kanaallada dhijitaalka ah ayaa ka qancay macaamil ka badan kan dhaqameed, hawsha wakiilka waddo.
The Jawaabaha waxay dhexgalaan Suuq geynta waxaa loo dhisay inay ka caawiso suuqleyda inay sameeyaan noocan oo kale ah suuq-geynta suuq-geynta. Barxadda ayaa gabi ahaanba udub dhexaad u ah macaamilka, iyadoo dib loo qeexayo habka ay suuqleyda adduunka ugu wanaagsan u maareeyaan xiriirkooda dhijitaalka ah isla markaana ay ugu gudbiyaan suuqgeynta saxda ah macaamiishooda emaillada, moobiilka, bulshada, muuqaalka iyo shabakadda. Iyo, waxay siisaa kooxaha suuq-geynta hal, xal wada shaqeyn ah si loo qorsheeyo, loo fuliyo, loo hagaajiyo loona abaabulo marxalado kala duwan, barnaamijyo suuq-geyn ah oo isku-dhaaf ah. Isdhexgalka Suuqgeynta Daruuraha waxay awood u siineysaa suuqleyda inay adeegsadaan xogtooda, dariiqadooda, si ay u gaarsiiyaan farriimaha ugu habboon ee macaamiisha ku mashquuliya kuna iibsanaya inta ay nool yihiin.
Tags: brandEmail Marketingmarketingfariimaha suuq geynta. iimaylshakhsi ahaaneedsuuq geynta emailka shaqsiga ahfariimo shaqsiyeedjawaabaha
Kyle Christensen waa kuxigeenka Suuqgeynta Wax soo saarka ee Jawaabaha halkaasoo uu mas'uul ka yahay wadista istiraatiijiyadda suuqgeynta wax soo saarka iyo meeleynta 'Responsys Interact Marketing Cloud'. Dhawaan, Christensen wuxuu ahaa Agaasime Sare ee Suuqgeynta Wax soo saarka iyo Maareynta ee Zuora, halkaas oo uu ku hogaamiyay dhammaan mas'uuliyadaha suuqgeynta iyo maareynta maareynta barnaamijyadeeda Z-Billing iyo Z-Payments. Zuora ka hor, Christensen wuxuu bilaabay oo uu socodsiiyay suuqgeynta wax soo saarka dhowr khadadka wax soo saarka ee Salesforce.com, oo ay ku jiraan Adeegga Cloud iyo Data.com.
Sayniska Sayniska Mise Waa Farshaxan?